Ixesha Lokuphuma Kwihotele IBossert EBrooklyn, ENew York
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTarascan IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiValencian IsiXhosa IsiZulu
Ixesha Lokuphuma Kwihotele IBossert
Ngo-2012, amaNgqina kaYehova athengisa iBossert Hotel. Izitshixo zadluliselwa kumnikazi omtsha, yaye njengezinye iindwendwe ezininzi, amaNgqina emka kuyo. Imali ethengiswe ngayo iza kusetyenziselwa ukuhambisela phambili umsebenzi wamaNgqina kaYehova wokufundisa iBhayibhile.
AmaNgqina aye asithengisa esi sakhiwo sinemigangatho eyi-14 nesakhiwe ngesimbo sokwakha saseItali kuba abasebenzi kwikomkhulu bayafuduka eBrooklyn, eNew York, besiya kwizakhiwo ezitsha eziseWarwick.
Imbali Yeminyaka Elikhulu
IBossert yakhiwa nguLouis Bossertt, umrhwebi wengqushu yamaplanga waseNew York, ngo-1909. Yayiza kuba yihotele yeendwendwe neyabantu ababeza kuyenza amakhaya abo. Ngenxa yokuba yayizala ngokukhawuleza, ngo-1914 wongeza amanye amagumbi, nto leyo eyayenza yaphantse yaphindeka kabini kobukhulu. Ngo-1916 kumgangatho ongaphezulu kongezwa ivenkile yokutyela ebizwa ngokuba yiMarine Roof.
Kwiminyaka ye-1980, amaNgqina kaYehova asithenga aza asihlaziya esi sakhiwo ukuze silungele abasebenzi abakwikomkhulu lawo nababeza kuhlala kuso. Iiballrooms zajikwa zaba ngamagumbi okutyela yaza indawo yokutyela eyayikumgangatho ongaphezulu yaba ligumbi lokuphumla abo bahlala apho neendwendwe zabo.
Ukususela ngo-2010, kwesi sakhiwo bekufikela iindwendwe ezingamaNgqina kaYehova ezisuka kulo lonke ihlabathi ezize kutyelela ikomkhulu.
Umnikazi omtsha wesi sakhiwo ufuna ukusijika asenza ihotele. Kuza kuba lula ukutshintsha iBossert eyindawo yokufota nenamagumbi okulala umntu omnye ibe yihotele ekumgangatho ophezulu ngenxa yemeko entle yesi sakhiwo.
Ngaphambi kokuba amaNgqina kaYehova afudukele eBossert, yayingasalungiswa kangangeminyaka. Iindonga zayo zangaphandle ezimhlophe zazimdaka, ilitye elijikeleze nelihombise ekupheleni kodonga laliqhekekile nesakhiwo eso singasemanga kakuhle. Iifestile zazindala ziphephezel’ umoya. IMarine Roof yona yayiyindawo yamahobe. Ngoko saqalisa ukulungiswa. AmaNgqina kaYehova aphuma kulo lonke elaseUnited States asebenzisa ixesha nobuchule anabo elungisa esi sakhiwo, aza asigqiba ngo-1991.
Ngoxa ayesilungisa, amaNgqina acoca aza alungisa udonga olungaphandle lwelimestone negranite. Asusa ilitye elalihombise ekupheleni kodonga afaka elifana nalo. Afaka iifestile ezintsha zemahogany.
Asilungisa sonke esi sakhiwo ngaphakathi, ingakumbi igumbi elihle ekufikelwa kulo. Alungisa iindonga zemarble ezonakeleyo ngamatye ekwari awayevela eItali. Kwalungiswa nesilingi yophahla eyayinobuqheleqhele neyayonakaliswe ngamanzi.
Kwabanzima xa kufikwa kwiintsika ezinkulu zentsimbi ezikweli gumbi. Ekuqaleni zazisanyentwe ngobuchule baseItali obenza zangathi zenziwe ngemarble . Noko ke, zazisele zipeyintwe izihlandlo ezininzi ngabanikazi bangaphambili besi sakhiwo. Akukho namnye kwaba bazalwana babelungisa esi sakhiwo owayekwazi ukuzisamenta zibe njengakuqala. Umzi ogcina iincwadi weyunivesithi ekufutshane wawunencwadi eyayibonisa iindlela zokusamenta ezi ntsika zibengathi zenziwe ngemarble. Aba bazalwana bafunda ezo ncwadi baza bachitha iiveki besamenta ezi ntsika ukuze zisondele kwinto ezaziyiyo ngaphambili.
Xa sagqitywayo ukulungiswa ngo-1991, sasisihle ngokwenene. Ngenxa yemigudu eyenziwayo yokulungisa iBossert, yafumana imbasa eyiLucy G. Moses Preservation Award.
Ixesha Lokuphuma Kwihotele IBossert, EBrooklyn, ENew York